စိတ်ပျက်ပါ ဒါပေမဲ့ မရပ်လိုက်ပါနဲ့ ရှေ့ဆက်လျှောက်ပါ...တဲ့
စိတ်ပျက်ပါ ဒါပေမဲ့ မရပ်လိုက်ပါနဲ့ ရှေ့ဆက်လျှောက်ပါ…တဲ့
6 Oct 2017 . 9:08 PM
သွားပြီ။ ရှုံးပြီဆိုပြီး ထင်ထားသလိုမဖြစ်တဲ့အခါ စိတ်ဓာတ်ကျသွားတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ကျွန်မလည်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာ စိတ်ပျက်ခဲ့ဖူးတယ်။ စိတ်မောလူမောနဲ့ ရှေ့ဆက်ဖို့အင်အားမရှိလောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရဘူးတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း အရှုံးတွေကို ရင်မဆိုင်ရဲဘူး.….ဆိုပြီးတော့ နောက်ဆုတ်လက်လျော့လိုက်တဲ့သူတွေလည်း အများကြီး။ ကျွန်မတော့ ရှုံးတယ် ဘာဖြစ်လဲ ဆက်လုပ်မှာပဲ။ အခါခါလဲကျလည်း နောက်မဆုတ်ဘူး နိုင်အောင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆရှိတဲ့သူပါ။
မသေမချင်းနိုင်အောင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ ဘဝကိုကြံ့ကြံ့ခံနေရတဲ့ အချိန်တွေအများကြီးပါ။ အဲဒီလို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ပြီးဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်သွားတာကိုပဲ အောင်မြင်တယ်လို့ လူတွေက ဆိုကြပြန်တယ်။
တကယ်တော့ အမှားတို့ အရှုံးတို့ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုပေးလိုက်တဲ့ အတွေ့အကြုံကောင်းတစ်ခု၊ အောင်မြင်မှုရရှိစေဖို့အတွက် လှေခါးထစ်လေးတစ်ထစ်ပါလို့ပဲ လက်ခံပါတယ်။
ဒီအဆင့်ကိုမဖြတ်သန်းဘဲနဲ့ ထိပ်ကိုမရောက်နိုင်သလို၊ ဒီအရှုံးမျိုး မကြုံဖူးဘဲနဲ့လည်း ကြီးကျယ်လှတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို မရရှိနိုင်ပါဘူးလို့လည်း ကျွန်မကနားလည်ထားတယ်။ မြင့်မားတဲ့အောင်မြင်မှုတိုင်းမှာ တန်ရာတန်ကြေး ပေးဆပ်ရတာတွေရှိတာပဲ။ ကျားကန်ရတာတွေလည်း ရှိတာပဲ။ စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းစွာနဲ့ကျော်ဖြတ်ရတာတွေ ရှိတာပဲ။
ကျွန်မအတွေ့အကြုံအရ အကောင်းဆုံးအကြံပေးရရင်တော့ မှားတယ်။ ရှုံးတယ်ဆိုတာကို လက်ခံလိုက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ရပ်မပြစ်လိုက်ပါနဲ့။
မှားလျက်နဲ့ မမှားဘူး၊ ရှုံးလျက်နဲ့ မရှုံးဘူးလို့ ဟန်မဆောင်မိပါစေနဲ့….အဲဒီလို ဟန်ဆောင်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ်ရမယ့်အောင်မြင်မှုဟာ ဝေးသွားတယ်၊ ကိုယ်တက်ရမဲ့ ခြေတစ်လှမ်းဟာ နောက်ကျသွားတယ်။
ဒါကြောင့် မှားပြီ၊ရှုံးပြီဆိုတာနဲ့ အဲဒါကို ချက်ခြင်းလက်ခံလိုက်ပါ၊။ ပြီးရင် ကိုယ့်အမှားနဲ့အရှုံးကို ပြန်မြင်အောင်ကြည့်ပါ၊ မြင်အောင်ကြည့်တဲ့နေရာမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရိုးသားပါ၊ သစ္စာရှိပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုးသားတယ်ဆိုတာက အရှိကို အရှိတိုင်း မြင်တာပါ၊ ကိုယ်ရဲ့အားနည်းချက်ကို မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါ အားသာချက်အဖြစ် မပြောင်းလဲနိုင်သေးတာကိုလည်း လက်ခံပါ။.
နောက်တစ်ခါ ဒီအားနည်းချက်ကြောင့် ထပ်မှားတာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင် အဲဒီအားနည်းချက်ကို အသုံးပြုရမယ့်အခြေအနေတွေကို ရှောင်လွဲပါ၊ အားသာချက်ကို များများအသုံးပြုနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပါ။
အဲလိုနဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုအားကောင်းလာပြီဆိုရင် စိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ စိုးရိမ်သောကရောက်တာတွေ မရှိတော့ဘူး။ ယုံကြည်ချက်အားကောင်းနေတဲ့အတွက် အပြုစိတ်လည်း ပိုများလာတယ်။ သူများကိုလည်း အပြစ်တင်တာတွေ မရှိတော့ပြန်ဘူး။ ဒါကြောင့် အောင်မြင်မှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့အပျက်စိတ်၊ အပြစ်တင်စိတ်၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနဲ့စိုးရိမ်ကြီးခြင်းတွေလည်း မရှိတော့ပြန်ဘူး။
ဒါဆို ကိုယ်သွားချင်တဲ့လမ်းက ပိုပြီးပြတ်သားလာပြီ၊ မရှုပ်ထွေးတော့ဘူး၊ ပိုပြီးတော့လည်း စိတ်ဝင်စားမှုလည်း အားကောင်းလာတဲ့အတွက် ကိုယ်လိုချင်တဲ့အရာကို ရရှိလာတော့တာပါပဲ။ ဒါကြောင့်မှားတာက အရေးမကြီးပါဘူး၊ ရှုံးသွားတာကလည်း အရေးမကြီးဘူး၊ အရေးကြီးတာက ရပ်မပစ်ဖို့ပါပဲ။
မရည်ရွယ်ဘဲနဲ့က အမှားတွေဆက်လုပ်နေရင်လည်း အဲဒီကနေသင်ယူပြီး အကောင်းဆုံးဘ၀တစ်ခု ရလာနိုင်တာပဲ။ အမှားနဲ့ အရှုံးဆိုတာကိုကြောက်ပြီး ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ ရှေ့မဆက်ဘဲနဲ့ ရပ်ပစ်လိုက်တာကမှ တကယ့်ကို ရှုံးသွားတာပါ။
ဒါကြောင့် ရပ်မပစ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ မှားပါစေ၊ ရှုံးပါစေ…အဲဒီကနေသင်ယူပြီး ရှေ့ဆက်ပါ။အမြဲတမ်း ရယ်မောလိုက်နိုင်တဲ့ သတ္တိမျိုးလည်း ရှိစေချင်တယ်။ ကျွန်မလည်း မှားခဲ့တယ်၊ရှုံးခဲ့တယ် ဒီကနေ့မှာလည်း အမှားတွေရှိနေတုန်းပါပဲ၊ ဒါပေမဲ့ ရှေ့ဆက်နေတုန်းပါ။ ရယ်မောပြီး သင်ယူနေတုန်းပါ၊အရှုံးတွေကိုလည်း ရိုးသားစွာ လက်ခံနေရတုန်းပါ။ ဒါပေမယ့် စိတ်မပျက်ပါဘူး၊ အရှုံးမပေးပါဘူး၊ ရပ်မပစ်ပါဘူးနော်။
ကျွန်မအရမ်းသဘောကျတဲ့ စကားတစ်ခွန်းရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဘ၀မှာအရေးကြီးတာက အောင်မြင်မှုရဖို့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနိုင်ဖို့ပါ…တဲ့။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မတူတဲ့အမြင်များရှိရင်လည်း ဆွေးနွေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။
စိတျပကျြပါ ဒါပမေဲ့ မရပျလိုကျပါနဲ့ ရှဆေ့ကျလြှောကျပါ…တဲ့
သှားပွီ။ ရှုံးပွီဆိုပွီး ထငျထားသလိုမဖွဈတဲ့အခါ စိတျဓာတျကသြှားတဲ့သူတှေ အမြားကွီးရှိတယျ။ ကြှနျမလညျး အကွိမျပေါငျးမြားစှာ စိတျပကျြခဲ့ဖူးတယျ။ စိတျမောလူမောနဲ့ ရှဆေ့ကျဖို့အငျအားမရှိလောကျအောငျ ဖွဈခဲ့ရဘူးတယျ။
ပတျဝနျးကငျြမှာလညျး အရှုံးတှကေို ရငျမဆိုငျရဲဘူး.….ဆိုပွီးတော့ နောကျဆုတျလကျလြော့လိုကျတဲ့သူတှလေညျး အမြားကွီး။ ကြှနျမတော့ ရှုံးတယျ ဘာဖွဈလဲ ဆကျလုပျမှာပဲ။ အခါခါလဲကလြညျး နောကျမဆုတျဘူး နိုငျအောငျတိုကျမယျဆိုတဲ့ အယူအဆရှိတဲ့သူပါ။
မသမေခငျြးနိုငျအောငျတိုကျမယျဆိုတဲ့စိတျဓာတျနဲ့ ဘဝကိုကွံ့ကွံ့ခံနရေတဲ့ အခြိနျတှအေမြားကွီးပါ။ အဲဒီလို ကွံ့ကွံ့ခံနိုငျပွီးဖွဈအောငျ လုပျနိုငျသှားတာကိုပဲ အောငျမွငျတယျလို့ လူတှကေ ဆိုကွပွနျတယျ။
တကယျတော့ အမှားတို့ အရှုံးတို့ဆိုတာ ကိုယျ့ကိုပေးလိုကျတဲ့ အတှအေ့ကွုံကောငျးတဈခု၊ အောငျမွငျမှုရရှိစဖေို့အတှကျ လှခေါးထဈလေးတဈထဈပါလို့ပဲ လကျခံပါတယျ။
ဒီအဆငျ့ကိုမဖွတျသနျးဘဲနဲ့ ထိပျကိုမရောကျနိုငျသလို၊ ဒီအရှုံးမြိုး မကွုံဖူးဘဲနဲ့လညျး ကွီးကယျြလှတဲ့ အောငျမွငျမှုတှကေို မရရှိနိုငျပါဘူးလို့လညျး ကြှနျမကနားလညျထားတယျ။ မွငျ့မားတဲ့အောငျမွငျမှုတိုငျးမှာ တနျရာတနျကွေး ပေးဆပျရတာတှရှေိတာပဲ။ ကြားကနျရတာတှလေညျး ရှိတာပဲ။ စိတျပငျပနျးလူပငျပနျးစှာနဲ့ကြျောဖွတျရတာတှေ ရှိတာပဲ။
ကြှနျမအတှအေ့ကွုံအရ အကောငျးဆုံးအကွံပေးရရငျတော့ မှားတယျ။ ရှုံးတယျဆိုတာကို လကျခံလိုကျပါ။ ဒါပမေဲ့ ရပျမပွဈလိုကျပါနဲ့။
မှားလကျြနဲ့ မမှားဘူး၊ ရှုံးလကျြနဲ့ မရှုံးဘူးလို့ ဟနျမဆောငျမိပါစနေဲ့….အဲဒီလို ဟနျဆောငျလိုကျတာနဲ့ ကိုယျရမယျ့အောငျမွငျမှုဟာ ဝေးသှားတယျ၊ ကိုယျတကျရမဲ့ ခွတေဈလှမျးဟာ နောကျကသြှားတယျ။
ဒါကွောငျ့ မှားပွီ၊ရှုံးပွီဆိုတာနဲ့ အဲဒါကို ခကျြခွငျးလကျခံလိုကျပါ၊။ ပွီးရငျ ကိုယျ့အမှားနဲ့အရှုံးကို ပွနျမွငျအောငျကွညျ့ပါ၊ မွငျအောငျကွညျ့တဲ့နရောမှာ ကိုယျ့ကိုယျကို ရိုးသားပါ၊ သစ်စာရှိပါ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုရိုးသားတယျဆိုတာက အရှိကို အရှိတိုငျး မွငျတာပါ၊ ကိုယျရဲ့အားနညျးခကျြကို မွငျအောငျကွညျ့ပွီးတဲ့အခါ အားသာခကျြအဖွဈ မပွောငျးလဲနိုငျသေးတာကိုလညျး လကျခံပါ။.
နောကျတဈခါ ဒီအားနညျးခကျြကွောငျ့ ထပျမှားတာမြိုးမဖွဈရလအေောငျ အဲဒီအားနညျးခကျြကို အသုံးပွုရမယျ့အခွအေနတှေကေို ရှောငျလှဲပါ၊ အားသာခကျြကို မြားမြားအသုံးပွုနိုငျအောငျ ဆောငျရှကျပါ။
အဲလိုနဲ့ကိုယျ့ကိုကိုယျ ယုံကွညျမှုအားကောငျးလာပွီဆိုရငျ စိတျဓာတျကတြာ၊ စိုးရိမျသောကရောကျတာတှေ မရှိတော့ဘူး။ ယုံကွညျခကျြအားကောငျးနတေဲ့အတှကျ အပွုစိတျလညျး ပိုမြားလာတယျ။ သူမြားကိုလညျး အပွဈတငျတာတှေ မရှိတော့ပွနျဘူး။ ဒါကွောငျ့ အောငျမွငျမှုကို အဟနျ့အတားဖွဈစတေဲ့အပကျြစိတျ၊ အပွဈတငျစိတျ၊ စိတျဓာတျကခြွငျးနဲ့စိုးရိမျကွီးခွငျးတှလေညျး မရှိတော့ပွနျဘူး။
ဒါဆို ကိုယျသှားခငျြတဲ့လမျးက ပိုပွီးပွတျသားလာပွီ၊ မရှုပျထှေးတော့ဘူး၊ ပိုပွီးတော့လညျး စိတျဝငျစားမှုလညျး အားကောငျးလာတဲ့အတှကျ ကိုယျလိုခငျြတဲ့အရာကို ရရှိလာတော့တာပါပဲ။ ဒါကွောငျ့မှားတာက အရေးမကွီးပါဘူး၊ ရှုံးသှားတာကလညျး အရေးမကွီးဘူး၊ အရေးကွီးတာက ရပျမပဈဖို့ပါပဲ။
မရညျရှယျဘဲနဲ့က အမှားတှဆေကျလုပျနရေငျလညျး အဲဒီကနသေငျယူပွီး အကောငျးဆုံးဘဝတဈခု ရလာနိုငျတာပဲ။ အမှားနဲ့ အရှုံးဆိုတာကိုကွောကျပွီး ဘာမှမလုပျဘဲနဲ့ ရှမေ့ဆကျဘဲနဲ့ ရပျပဈလိုကျတာကမှ တကယျ့ကို ရှုံးသှားတာပါ။
ဒါကွောငျ့ ရပျမပဈဖို့ပဲ လိုပါတယျ။ မှားပါစေ၊ ရှုံးပါစေ…အဲဒီကနသေငျယူပွီး ရှဆေ့ကျပါ။အမွဲတမျး ရယျမောလိုကျနိုငျတဲ့ သတ်တိမြိုးလညျး ရှိစခေငျြတယျ။ ကြှနျမလညျး မှားခဲ့တယျ၊ရှုံးခဲ့တယျ ဒီကနမှေ့ာလညျး အမှားတှရှေိနတေုနျးပါပဲ၊ ဒါပမေဲ့ ရှဆေ့ကျနတေုနျးပါ။ ရယျမောပွီး သငျယူနတေုနျးပါ၊အရှုံးတှကေိုလညျး ရိုးသားစှာ လကျခံနရေတုနျးပါ။ ဒါပမေယျ့ စိတျမပကျြပါဘူး၊ အရှုံးမပေးပါဘူး၊ ရပျမပဈပါဘူးနျော။
ကြှနျမအရမျးသဘောကတြဲ့ စကားတဈခှနျးရှိပါတယျ။ အဲဒါကတော့ ဘဝမှာအရေးကွီးတာက အောငျမွငျမှုရဖို့ မဟုတျပါဘူး၊ ရုနျးကနျလှုပျရှားနိုငျဖို့ပါ…တဲ့။
ကြေးဇူးတငျပါတယျ၊ မတူတဲ့အမွငျမြားရှိရငျလညျး ဆှေးနှေးကွဖို့ ဖိတျချေါပါတယျရှငျ။
by Ju Jue . 58 mins ago
by redrose . 22 hours ago